ဘယ်လိုအဖြူရောင်ကောင်လေးအရအရပ်။ များမှာအာရပ်မိန်းကလေးများသို့အဖြူယောက်ျားတွေ။ အဘယ်ကြောင့်မပါခ်င္ဘူး။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ရာကိုချဉ်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
ဘယ်လိုအဖြူရောင်ကောင်လေးအရအရပ်။ များမှာအာရပ်မိန်းကလေးများသို့အဖြူယောက်ျားတွေ။ အဘယ်ကြောင့်မပါခ်င္ဘူး။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ရာကိုချဉ်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့
ဘယ်လိုအဖြူရောင်ကောင်လေးအရအရပ်မိန်းကလေး? များမှာအာရပ်မိန်းကလေးများသို့အဖြူယောက်ျားတွေ။ အဘယ်ကြောင့်မပါခ်င္ဘူး။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ရာကိုချဉ်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ခ်ိန္တြင္လက်ထပ်ထိမ်းမြားအလွန်တားမြစ်ထားပါတယ်အတွက်အာရပ်ကမ္ဘာ၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်နှင့်သင်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးအာရပ်၊မိန်းကလေးတစ်ဦး၊ကိုပြောင်းလဲဖို့သူမဘာသာဒါဟာလုပ်ကိုင်ဖို့မသွား။ ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကိုတဦး၏ဘာသာတရားကိုသင်လိုက်နာ။ ပြောသင့်ရပ်ရည်းစားခဲ့ဝတ်ဒေါက်၊သင်ရောမကက်သလစ်။ သည်နိုင်ရန်အတွက်အိမ်ထောင်ဖြစ်ဖို့လက်ခံခဲ့သည်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဖြစ်လာရန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဝတ်ထားသော။။ သင်သည်ဤပြုနိုင်သည်ကိုအောက်ပါအားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုအကောက်ခွန်ဖို့အကောင်းဆုံးသင်သည်သင်၏စွမ်းရည်ကို(အလုပ်ကြိုးစား၏၊ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးပြည့်စုံသော) ရပ်ဖခင်မဖြစ်စေမယ့်သူ့သမီးကိုလက်ထပ်ရှိသည်ပါဘူးသူတစ်ဦးအတည်ငြိမ်ပြီးဝင်ငွေနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သူလိုသူ၏သမီးသည်ကောင်းစွာ များ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီး၊သူမဖို့ရှိသည်ပါဘူးအလုပ်နှင့်သားသမီးလိုချင်ကြဘူးကြောင်း။ ငါယ့်ငါးဝမ်းကွဲ၊နှင့်အကြောင်းစဉ်းစားမယ့်အတန်သေးငယ်တဲ့အားဖြင့်အာရပ်၊ဒါကြောင့်ကိုပြင်ဆင်ခံရဖို့လူတွေအများကြီးတွေ့နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းအားလုံး။ အများစုမှာအာရပ်မိန်းကလေးများသည်အထိစောင့်ဆိုင်းထောင်ဖို့လိင်ရှိသည်၊ငါတို့သည်အလွန်သတိထားကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်။ ကိုယ့်အသိလျှင်သင်နမ်းပြီး၊ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကတိသစ္စာပြုဆက်ဆံရေး။ ညီအစ်ကိုရပ်များမှာအလွန်အကာအကွယ်၏သူတို့ရဲ့အစ်မတွေအထူးသဖြင့်အခါ၊ညီမအငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာအောင်ဆက်ဆံပြီးရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူနှင့်ကြင်နာမှု၊နှင့်ပင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ညီအစ်ကိုများဖြစ်မည်အအေးအစဦးတွင်၊သူတို့တက်နွေး။ ဒီအယူအဆရှိခြင်း၏ဆက်ဆံရေးကိုမျိုးစုံလူတွေနဲ့အတူတစ်ချိန်တည်းမှာနေစဉ်ဖြစ်ခြင်းမှကျူးလွန်သူတို့ထဲကတစ်ဦးအလွန်နိုင်ငံခြားမှအာရပ်ယဉ်ကျေးမှု။ အာရပ်မိန်းကလေးများအတက်မတင်ပါနဲ့၊နှင့်အတူတွေဒီလို။ သငျသညျတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ချင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သီးသန့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ၊သို့မဟုတ်သင်ထိမှန်နိုင်။ ဒါကခက်ခဲမှုတ်စေခြင်းငှါ၊ဒါပေမယ့်ငါပြောလိမ့်မယ်ဒါဟာဆုလာဘ်။ ပါက သင်အားလုံးတက်အဆုံးသတ်အတူတူ၊သင်ယခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရယ်စရာရွှင်စရာမိသားစုလိမ့်မည်သူကိုအစဉ်အမြဲအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်။ လည်း၊အာရပ်အမျိုးသမီးကြီးချက်ပြုတ်၊နှင့်အပေါင်းအလွန်းလျှင်သင်သည်လိမ္မာသောထိုမီးဖိုချောင်အတွက်၊ကိုယ့်အစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်နှင့်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြဖို့ကောင်းသောအစားအစာပြင်ဆင်သည်မည်သို့အာရှလူနှင့်အတူတူရနိုင်နဲ့တစ်ကော့ကေးရှန်းအမျိုးသမီး။ ကြကော့ကေးရှန်းအမျိုးသမီးများသို့အာရှအမျိုးသားများ။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ရာကိုချဉ်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
Te ataata ngā o ngā whakawhitinga, analogs, me te Teití ipurangi.
ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်း ဗီဒီယိုချက်တင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ ချိန်းတွေ့ဘို့အဆက်ဆံရေး အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ဗီဒီယိုချက်တင် ဗီဒီယိုစကားပြော ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာ ငါလိုအ ဗီဒီယိုအခမဲ့စကားပြောခန်း ၁၈